Jacaylka jacaylka jinsiga Abaalgudka Abaalgudka Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Relationships Jacayl sida rabitaan jinsi ah
Rabitaan jinsi ah, wadida jinsiga, isweydaarsiga ama dareenka 'rabitaanka,' sidoo kale waa abaalmarin dabiiciga ah, ama rabitaanka cuntada, oo ay dhalisay nukliyirka dopamine. Dopamine macnaha ereygan ayaa kicinaysa 'rajada' abaalmarinta, rabitaanka iyo rabitaanka. Hawlgalkeeda ugu weyni waa inaan nagu dhiirrigelinno inaan dhalanno, haddii aan dhab ahaan doonno inaan ilmo dhalno ama mayno, markaan jaceyl ku sameynayo.
Dabiicigu wuxuu leeyahay qorshe aad u cad oo awood leh - si loo helo jinsiyadaas jiilka xiga. Waxay ku koraan kala duwanaanta hidaha. Sababta tani waa in la xoojiyo hiddaha hiddaha. Inbreeding waxay keeneysaa cillado hidde ah iyo welwel caafimaad. Tani waa mushkilo dhaqameedyo badan oo ah guurka ilma adeerka u ah. Qaadashada noocyada hidde-abuurka micnaheedu waa in haddii cudurku uu jiro cudur ama xaalado kale oo xagjirnimo ah oo ku dhaca xaaladaha nolosha, waxaa suurogal ah in qaar ka mid ah shakhsiyaadka ay isku dhafanayaan gen oo u oggolaanaya inay ku noolaadaan.
Orgasm, dareenka xooggan ee raaxada in badan oo ah ujeedada ficil galmo, waxay ka dhigtaa casaan ah nuucyada kiimikooyinka, opioids, in aan la kulanno nasiib wanaag. Markay taasi dhacdo dopamine ayaa joojiya in lagu boodo dariiqa abaalmarinta. Dhamaan wixii soo kordha dib ayaa dib loogu warshadeeyaa nidaamka u diyaarsan fursadda soo socota si aad noogu gaarsiiso hadafka badbaadada, kan hadda la joogo.
Doonista ah in la dareemo dareenka farxad aad u daran ayaa noo keenta in aan mar kale mar kale ku celino fal-celinta. Of dhan abaalmarin dabiici ah, orgasm waa kan keena dopamine ugu weyn iyo dareemidda raaxada nidaamka abaalmarinta maskaxda. Waa farsamooyinka ugu muhiimsan ee istiraatijiyadda dabiiciga ah ee naga ilaalinaya bacriminta iyo soo saarida ilmo badan.
Laakiin waxaa jira cillad nidaamsan, haddii kale dhamaanteen waan jeclaan lahaa jacaylka, waxaanan ku noolaan doonnaa si farxad leh ka dib, iyo qareenada furiinka ma aha mid mashquul ah.
Lamaanaha isqaba Saamaynta Coolidge >>